घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » एयरलाइन्स » एयर इंडिया: अन्त मा सार्ने मा?
एयरलाइन्स • उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • सरकारी समाचार • भारत ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा
एयर इन्डिया को स्वामित्व र संचालन कसको हुनेछ भन्ने महत्वपूर्ण मुद्दा मा चीजहरु अन्ततः अघि बढिरहेको देखिन्छ, जुन सरकार द्वारा विनिवेश गरीएको छ।
वित्तीय लगानी बोलीदाता अन्ततः समस्याग्रस्त एयर इंडिया एयरलाइन्स को लागी उभरिरहेको छ।
यो राष्ट्रिय वाहक बेच्ने प्रयास को धेरै बर्षहरु भएको छ, प्रयासहरु संग विभिन्न र विभिन्न कारणहरु को लागी अवरुद्ध गरीएको छ।
अझै पनी डकेट मा एयरलाइन्स को भारी घाटा छ - उनीहरुलाई कसले सम्हाल्ने छ - नयाँ खरीददार वा सरकार?
टाटा सन्स को स्थापना एयर इंडिया एयरलाइन १ 1932 ३२ मा र त्यसपछि १ 1953 ५३ मा बाहिर निस्कियो, एक पटक फेरी एयरलाइन्स को लागी एक बोलीदाता हो, र यो केहि अन्य प्रमुख बोलीदाताहरु संग वित्तीय बोलपत्र पेश गरीएको छ।
स्पाइसजेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि एउटा प्रस्ताव राखेका छन्, र केही लगानी कोष पनि एयरलाइन्सलाई सुरक्षित बनाउनको लागी बोली प्रक्रियामा सिंहको साथमा आएका छन्। सिंह अब केहि बर्ष को लागी उड्डयन क्षेत्र मा एक प्रमुख खेलाडी भएको छ, र अब उनको भूमिका मा एयर इन्डिया हेरिरहेको छ ठूलो चासो संग।
सुरक्षा निकासी र बिक्री को लागी एक आरक्षित मूल्य को निर्धारण दुई महत्वपूर्ण पहलुहरु छन् कि सरकारले समाधान गर्नु पर्छ। अन्य कारकहरु जो चिन्ताको विषय बनेका छन् कि एयर इन्डियाले वर्षौंदेखि जम्मा गरेको ठूलो घाटा संग कसरी व्यवहार गर्ने, र महाराजा लाइन को अन्य सम्पत्तिहरु लाई कसरी व्यवहार गर्ने, यसको अचल सम्पत्ति र कला संग्रह सहित। ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग र एयर केटरि also्ग पनि चिन्ताको बिषय बनेको छ जब देखि विनिवेश को कुरा उठ्यो।
पछिल्ला केहि बर्षहरुमा, धेरै प्रयासहरु को लागी राष्ट्रीय वाहक बेच्न को लागी गरीएको छ, तर ती प्रयासहरु विभिन्न कारणहरु को लागी रोकिएको थियो। एउटा प्रमुख कारण यो थियो कि कसले ठूलो घाटा सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने हो - नयाँ खरीददार वा सरकार?
स्टाफ मुद्दाहरु पनि अर्को समस्या को स्थान भएको छ, नयाँ खरीदार द्वारा कसलाई राखीनेछ, र जो को बर्खास्त गरीन्छ जस्तै प्रश्नहरु संग? युनियन र संघहरु एक चरण मा एक भन्न को लागी उत्सुक थिए र बोली को बारे मा सोच्दै थिए।
भूमिका, यदि कुनै हो, विदेशी खरीदारहरु को एक चर्चा बिन्दु थियो, तर अब यस्तो देखिन्छ कि प्रमुख बोलीदाता टाटा र अजय सिंह को सहभागिता को रूप मा वित्तीय बोलपत्र संग आएका छन्।
सेप्टेम्बर 19, 2021 मा 07: 47
मलाई थाहा छ यो होईन किनकि म तपाइँ संग हुन चाहन्छु। म गर्दिन। कहिले काहिँ मलाई लाग्छ कि म तिमी संग हुन लायक छु, जस्तै म लायक छु चोट तिमी मलाई यति सजीलो ल्याउन लायक। "हेर, यदि तपाइँ साँच्चै यस समय पछि सबै मा सार्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ उसलाई उसलाई दुखाईको लागी उसलाई क्षमा दिन आवश्यक छ, चाहे तपाइँ जे भए पनि।